Sary nindramina CENI
Samy teo ny délégué kandida, vao nosokafana ny colis, ka raha tsy nanana délégué ny Kandida, iza no diso?
Fanisam-bato sy fanaovana PV: Nandritra ny fanisam-bato, samy teo ny mpifidy, natao peta-drindrina ny résultat, nofenoina niaraka ny PV, raha tsy nisy délégué ny Kandida teo, iza no diso?
Ny CENI manao publication BV/BV izay hita any amin'ny tranokalan'ny CENI, azon'ny kandida alaina sous fichier excel any amin'ny CENI, azony anaovana kajy manokana, ialana amin'ny resaka hoe logiciel truqué, ka rehefa tsy nitovy tamin'ny vokatra tany aminao, mandehana mitory any amin'ny HCC, ary naninona tsy nanao remarque tany amin'ny CENI, iza no diso?
SRMV: Misy délégué Kandida miaraka amin'ny Magistrat eo manao ny compilation résultat isaky ny Distrika, raha tsy nanao ny asany teo ny délégué Kandida, iza no diso?
CENI: Manana solotena ao amin'ny CENI ny Kandida, rehefa mivoaka ny trano izy, na antsona hanao confrontation nefa tsy tonga, iza no diso?
HCC: Eto kosa tsy misy mahazo mitsabaka eo intsony, fa dia miandry ny fanapahana isika.
Ny ambonin'izay resabe, fa omano ny 2e tour.